Dharka dharka ragga |
Anti Bacterial Plus Size Dheist Band Band Elastic Daily Rens kooban
Dhar jilicsan oo Ultra ah, ka neefsasho badan oo ka fudud dharka nigiska cudbiga ah
3D U-POUCH EE ULTRA ROOMY: Naqshad heer sare ah oo loo yaqaan 'U-pouch design' ayaa lagu daray galmada hoosteeda ee surwaalka si loogu helo boos dheeri ah oo loogu talagalay qaybaha gaarka ah ee ragga iyada oo aan laga bixin ama aan la xakamayn. Waxay kaa caawineysaa inaad kaa dhigto mid isku kalsoon oo galmo xiranaya joornaaladayada waaweyn
Joogitaan adag oo jilicsan dhig dhexda dhexda oo leh astaan ​​caan ah taas oo wanaagsan in la yareeyo kicinta jirkaaga
Custom Color Anti Static jilicsan Cotton Neefsasho Gay Ragga Dharka
Isboortiga ragga ayaa dhiirrigeliyay feeryahan kooban oo leh dhar Cool Dri ah oo qoyaanka ka ilaaliya maqaarka si uu kuu qaboojiyo oo u qalajiyo; Had iyo jeer Tag bilaash si aad ugu hesho raaxo bilaash ah cuncun leh duullimaad dhaqameed.
Knitted Quick qalalan Cotton Custom raaxo Ragga Dharka aasaasiga ah
Mesh Boxer kooban: 90% polyester 10% spandex, mid ka mid ah ragga ugu neefsashada badan uguna dhaqsiyaha badan ee nigiska firfircoon.
Faa'iidooyinka Dharka:Neefsashada dharka qoyaanka leh ee nuugaya iyo qoyaanku waxay kaa dhigayaan kuwo qallalan oo qabow maalinta oo dhan. Dharka hoosta ah ee Poudew ee loogu talagalay ragga ayaa ku habboon guriga, jimicsiga, safarka iyo cayaaraha.
Qoyaanka Miisaanka Leh ee Labista Dharka Dharka ah ee Dharka aasaasiga ah
Neefsasho la yaab leh oo khafiif ah oo qoyaanku qoyaanku ku hayo ayaa jidhkaaga ka dhigaysa mid qallalan oo qabow maalinta oo dhan.
Waad ku mahadsantahay faa iidadan mesh, fekerkeena fekerka ayaa ah mid ka mid ah nigiska ugu neefsashada badan.
Dhex-dhig dhexda, neefsashada, waraaqaha feerka ee dharka qalalan oo dhaqso ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku raaxeysato marka aad dhaqaaqeyso.
Ma xoqin ama xoqin tolid ayaa ku siinaysa adiga macaan.
Boorso buuxda oo la gooyey oo kor u sii kac qol badan.
Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa oo kor loo qaaday si loogu raaxeeyo.
Furo Crotch Anti-Bakteeriyada Neefta Dharka Dharka Dharka Dharka
nigis badan oo ragga loogu talo galay oo ah Fruit Of The Loom oo bixiya bilaa sumad, raaxo maalin dhan ah iyo duqsi u qaab eg; Dharka labiska ragga, dharka neefta ee neefta leh waxay leeyihiin labalaab difaac ah; Muuqaalka IntelliFresh ee lebbiska ragga labiska ah waxay ka hortagtaa bakteeriyada keenta urta waxayna siisaa ilaalin ur joogto ah